Dhulgariir xoogan oo mar kale Talyaaniga ku dhuftay - BBC News Somali
Dhulgariir xoogan oo mar kale Talyaaniga ku dhuftay
Lahaanshaha sawirka EP
Image caption Dhismeyaasha qaarna dhulkay galeen kuwona dhaawac wayn baa gaadhay laakiin dhimasho lama sheegin
Kumanaan qof oo ku nool badhtamaha Talyaaniga ayaa u hoyday teendhooyin iyo baabuurtooda ka dib markii dhulgariir xoog lihi ku dhuftay dalka, kaas oo noqonaya kii afraad gobolladaa ku dhufta tan iyo bishii Ogost.
Dadka degan magaalada dhulgariika xoogiisu ku dhuftay ee Norcia ayaa shegay in ay aad uga baqayaan inay magaalada sii joogaan.
Gariir kala googo'an oo xoog leh oo dhulgariika ka dib laga dareemayo magaalada ayaa ilaa haatan guryo badan dhulka soo dhigay. Labaataneeyo qof ayaa ku dhaawacmay dhulgariirkan Axaddii dhacay laakiin cid ku dhimatay lama soo sheegin ilaa haatan.
Saraakiisha ayaa sheegay in saddex qof laga soo hoos saaray iyagoo nool guryo ku dumay magaalada Tolentino. Badhasaabka gobolka Marche ayaa sheegay in ilaa boqol kun oo qof ay gargaar u baahan doonaan.